Myanmar Man’s Diary » Morai and Nan Pha Long Market
03.01.07 | | No Comments
Morai and Nan Pha Long Market နန့်ဖာလုံ ဈေးနှင့် မိုရေးမြို့ တမူးကနေ လိုင်းကား (သို့) ဆိုင်ကယ် သုံးဘီး စီးသွားရင် အိန္ဒိယ...
Tamu, Kabaw Valley Tamu isatown in Kabaw Valley. It is situated...
Tamu, Kabaw Valley တမူးမြို့ တမူးမြို့ဟာ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်းက မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ မြန်မာ နယ်စပ် အနီး တည်ရှိပြီး...
Tagged: Kabaw Valley, Myanmar Travel, Tamu
« Morai and Nan Pha Long Market
» Kalay Tamu Highway